Saddex Nin oo isku reer ah oo ku shiraya Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Saddex Nin oo isku reer ah oo ku shiraya Muqdisho
Inay Muqdisho isagu yimaadaan waxuu ahaa qorsho horey Farmaajo u dejiyay, oo lagu heshiiyay inaysan Axmed Madoobe iyo Deni ka qeybgalin Shirkii Dhuusamareeb 3, kaasoo ay tageen Maamullada Galmudug, HirShabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir.
MUQDISHO, Soomaaliya - Muqdisho waxaa ku sugan Madaxda Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni oo todobaad hore yimid, iyagoo wata Ciidamo u gaar ah oo amaankooda ilaalinaya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa u yeeray labada hogaamiye ee isku reerka yihiin, si ay uga hadlaan arrimaha dalka Soomaaliya, iyagoo ku shiraya Muqdisho oo ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo maqaam haysan, oo dushooda lagu gor-gortamaya.
Villa Soomaaliya ayay shalay ku kulmeen saddex Mas'uul, iyagoo yeeshay shir albaabada u xiran, oo macluumaadkiisa laga qariyay Shacabka Soomaaliyeed, oo la yaaban sida Farmaajo uu maqaamka sare u dhigay reerkiisa, kuwa kalena uga dhigay waxba kama jiraan.
Deni yo Axmed Madoobe ayaa diiday inay aqbalaan natiijadda Shirkii Dhuusamareeb, waxaana hadda u joogaan Muqdisho inay helaan sed-buris iyo rabitaankooda qodobo ku salaysan in lagu soo daro heshiiskii hore.
Mabda'a sareysiinta reerkiisa waa mid uu Farmaajo ku caan-baxay, iyadoo xitaa Waxbarashadii qabyaaladeeyay oo Iskuullada ku yaalla Gedo dhigay kuwa ugu sareeya ardaydooda Imtixaanka dowladda ee Dugsiga Sare ee 2019-2020. [Halkan ka akhri Warka]
Axmed Madoobe oo dhibaatooyin badan iyo tacadiyo ku haya dadka Jubbaland, islamarkaana ku dilay Kismaayo odayaal badan iyo ganacsato markii uu magaaladda qabsaday kadib ayaa Farmaajo u saxiixay inuu 4 sano oo kale kursiga ku fadhiyo.
Madaxweynaha ayaa aqbalay inuu Ciidanka DF kasoo saaro gobolka Gedo, kuna bedelo malleeshiyaadka Axmed Madoobe oo lagu eedeeyo xad-gudubyo bini'aadanimada.